Inkqubo yokubuza kwiCandelo leShishini | Law & More B.V.
Blog » Inkqubo yokubuza kwiGumbi leShishini
Ukuba iingxabano ziye zavela ngaphakathi kwenkampani yakho ezingenakusonjululwa ngaphakathi, inkqubo phambi kweCandelo leShishini inokuba yindlela efanelekileyo yokusombulula. Inkqubo enjalo ibizwa ngokuba yinkqubo yophando. Kule nkqubo, i-Enterprise Chamber iyacelwa ukuba iphande umgaqo-nkqubo kunye nemicimbi yeziko ngaphakathi kweziko elisemthethweni. Eli nqaku liza kuxoxa ngokufutshane ngenkqubo yophando kunye nento onokuyilindela kuyo.
Ukwamkeleka kwinkqubo yophando
Isicelo sophando asinakuthunyelwa ngumntu wonke. Inzala yomenzi-sicelo kufuneka yanele ukuthethelela ukufikelela kwinkqubo yophando kwaye kungoko kungenelela kweGumbi leShishini. Kungenxa yoko le nto abo bagunyazisiweyo ukuba benze njalo ngeemfuno ezifanelekileyo badweliswe ngokupheleleyo emthethweni:
Izabelo kunye nabanini bezatifikethi zeNV. kunye neBV Umthetho wahlula phakathi kwe-NV kunye nee-BV ngenkunzi eyi-22.5 yezigidi okanye ngaphezulu. Kwimeko yangaphambili abanini zabelo kunye nabanini beziqinisekiso babambe i-10% yenkunzi ekhutshiweyo. Kwimeko yee-NV kunye nee-BV ezinemali ephezulu ekhutshiweyo, umyinge we-1% yemali eyinkunzi ekhutshiweyo iyakusebenza, okanye ukuba izabelo kunye neerisithi zedipozithi zezabelo zamkelwe kwimakethi elawulwayo, ixabiso elisezantsi le- $ 20 yezigidi. Umqobo osezantsi unokuseta kumanqaku ombutho.
The ubume bezomthetho uqobo, ngebhodi yolawulo okanye ngebhodi yokujonga, okanye itrasti njengobhengezo lweziko elisemthethweni.
Amalungu ombutho, wentsebenziswano okanye woluntu ukuba bamele i-10% yamalungu ubuncinci okanye abo banelungelo lokuvota kwintlanganiso kawonke-wonke. Oku kuxhomekeke kubantu abangama-300 ubuninzi.
Imibutho yabasebenzi, ukuba amalungu ombutho asebenza kwisibambiso kwaye umbutho unamandla apheleleyo asemthethweni ubuncinci iminyaka emibini.
Amanye amandla ekhontrakthi okanye asemthethweni. Umzekelo, ibhunga lemisebenzi.
Kubalulekile ukuba umntu onelungelo lokufaka uphando enze izichaso zakhe malunga nomgaqo-nkqubo kunye nemicimbi yenkampani eyaziwayo kwibhodi yolawulo nakwibhodi yokujonga. Ukuba oku akukwenziwanga, iCandelo loShishino aliyi kusithathela ingqalelo isicelo sokubuza. Abo babandakanyekayo ngaphakathi kwinkampani kufuneka babe nethuba lokuqala lokuphendula kwizichaso ngaphambi kokuba kuqaliswe inkqubo.
Inkqubo: izigaba ezibini
Inkqubo iqala ngokungeniswa kwesikhalazo kunye nethuba lokuba amaqela abandakanyekayo kwinkampani (umz. Abanini zabelo kunye nebhodi yolawulo) bayiphendule. Igumbi loShishino liyakusinika uxwebhu lwezikhalazo ukuba iimfuno zomthetho zifezekisiwe kwaye kubonakala ngathi kukho 'izizathu ezifanelekileyo zokuthandabuza umgaqo-nkqubo ochanekileyo'. Emva koku, izigaba ezibini zenkqubo yophando ziya kuqala. Kwisigaba sokuqala, umgaqo-nkqubo kunye neziganeko zangaphakathi kwinkampani ziyavavanywa. Olu phando lwenziwa ngumntu omnye okanye nangaphezulu abatyunjwe liCandelo lamaShishini. Inkampani, amalungu ebhodi yabaphathi, amalungu ebhodi yolawulo kunye (nabangaphambili) kufuneka basebenzisane kwaye banike ukufikelela kulawulo lonke. Iindleko zophando ziya kuthi ngokwazo zihlawulwe yinkampani (okanye umfaki sicelo ukuba inkampani ayinakho ukuzithwala). Kuxhomekeke kwisiphumo sophando, ezi ndleko zinokufunyanwa kumenzi-sicelo okanye kwibhodi yolawulo. Ngokwesiseko sengxelo yophando, iCandelo lamaShishini linakho ukuseka kwisigaba sesibini ukuba kukho ulawulo gwenxa. Kwimeko apho, iCandelo loShishino linokuthatha amanyathelo afikelela kude.
Ngexesha lenkqubo kwaye (nangaphambi kokuba isigaba sokuqala senkqubo siqalise) iQumrhu leShishini linokuthi, ngesicelo somntu onelungelo lokubuzwa, lenze amalungiselelo okwethutyana. Ngokuphathelene noku, i-Enterprise Chamber inenkululeko enkulu, okoko nje ulungiselelo luthethelelwa yimeko yequmrhu elisemthethweni okanye kumdla wophando. Ukuba ulawulo olugwenxa lusekiwe, i-Enterprise Chamber nayo inokuthatha amanyathelo aqinisekileyo. Ezi zinto zibekwe ngumthetho kwaye zikhawulelwe:
ukunqunyanyiswa okanye ukurhoxiswa kwesigqibo sabalawuli abalawulayo, abalawuli abongameleyo, intlanganiso jikelele okanye naliphi na iqumrhu leziko elisemthethweni;
ukunqunyanyiswa okanye ukugxothwa komlawuli omnye okanye nangaphezulu okanye abalawuli;
Ukuqeshwa okwethutyana komlawuli omnye okanye abangaphezulu okanye abalawuli;
Ukuphambuka okwethutyana kwimimiselo yamanqaku ombutho njengoko kubonisiwe yiGumbi lokuShishino;
ukuhanjiswa kwethutyana kwezabelo ngendlela yolawulo;
ukuchithwa komntu osemthethweni.
Sisibheno kwi-cassation kuphela esinokufakwa ngokuchasene nesigqibo seCandelo leShishini. Igunya lokwenza oko lilele kwabo bathe bavela phambi kweCandelo loShishino kwinkqubo, kunye nakwiziko elisemthethweni ukuba alibonanga. Umda wexesha lokuya kwi-cassation ziinyanga ezintathu. I-Cassation ayinasiphumo sokurhoxisa. Ngenxa yoko, i-odolo yeCandelo loShishino ihlala isebenza de kube kuthathwe isigqibo ngokuchasene neNkundla ePhakamileyo. Oku kunokuthetha ukuba isigqibo seNkundla ePhakamileyo sinokufika emva kwexesha kuba iCandelo leShishini sele lenzile amalungiselelo. Nangona kunjalo, i-cassation inokuba luncedo ngokunxulumene noxanduva lwamalungu ebhodi yolawulo kunye namalungu ebhodi yokujonga ngokunxulumene nolawulo olugwenxa olwamkelwe liCandelo loShishino.
Ngaba ujongene neengxabano kwinkampani kwaye ucinga ngokuqala inkqubo yovavanyo? Inkqubo ye- Law & More Iqela linolwazi oluninzi lomthetho wobumbano. Sikunye nawe sinokuvavanya imeko kunye nezinto ezinokwenzeka. Ngesiseko solu hlalutyo, sinokukucebisa ngamanyathelo afanelekileyo alandelayo. Siya kukuvuyela ukukunika iingcebiso kunye noncedo ngalo naliphi na inkqubo (kwiCandelo loShishino).
Post edlulileyo Ukugxothwa ngexesha lokuvavanywa
Post Next Alimony